हवाई प्रतिवन्ध फुकुवा : ८ देशको अन्तर्राष्ट्रिय उडान अब नियमित,५ देशमा चार्टर्ड फ्लाइट हुने - News Bihani
# नेपाली रेल
हवाई प्रतिवन्ध फुकुवा : ८ देशको अन्तर्राष्ट्रिय उडान अब नियमित,५ देशमा चार्टर्ड फ्लाइट हुने
बुधवार, भाद्र १० २०७७
बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान अब सुचारु हुने भएको छ । अब मलेसिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हङकङ, यूएई र कतारमा नियमित उडान हुने भएको छ । सरकारले कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथि लगाएको प्रतिवन्ध ८ वटा देशका हकमा भने फुकुवा गरेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८ देशमाथिको उडान प्रतिवन्ध खुला गर्दै नियमित उडान तालिका तय गरेको छ । गत चैत १० गतेबाट कुनै पनि देशका विमानले नेपालमा उडान भर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाइएको थियो ।१ सेप्टेबरपछि चार्टर्ड उडानमा भने स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीबाटै उडान हुने भएको छ । सरकारले स्वदेशी दुई वायुसेवा कम्पनीलाई कुल २९ वटा उडानको अनुमति दिएको छ भने नेपाल एयरलाइन्सले १७ र हिमालयले १२ उडान भर्नेछन् ।
विदेशी वायुसेवा कम्पनीले भने ३१ वटा उडानको अनुमति पाएको छ । यो तालिका भने १ सेप्टेबरबाट लागु भई एक महिनासम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार निर्णय हुनेछ। सरकारले अहिले पिसिआर परीक्षण सहज हुने देशलाई मात्र छानेको छ तर यी देशबाट पर्यटक र गैरआवासीय नेपाली भने नेपाल आउन पाउने छैनन् ।
नेपाली नागरिक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, विकास साझेदारी संघ संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधि सरकारी आमन्त्रणमा आउने व्यक्तिले मात्र नेपाल प्रवेशको अनुमति पाउनेछन् । सरकारले अनअराइभल भिसा बन्द गरेका कारण सबै व्यक्तिले नेपाल आउनका लागि सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाटै भिसा लिनुपर्ने गरी उडान तालीका तय भएको हो ।
सम्बन्धित मुलुकले आफै पठाउने उडानको हकमा मात्र विदेशी कम्पनीले अनुमति पाएका छन् । सरकारले पिसिआर परीक्षण सम्भव नहुने मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकलाई लक्षित गर्दै आगामी एक महिनाका लागि चार्टर्ड उडानको अनुमति दिएको हो ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सेप्टेम्बरमा कुल २७ वटा चार्टर्ड उडान हुनेछन् । ती मुलुकमा तत्काल नियमित हवाई उडान भने हुने छैन । सरकारले सेप्टेबर महिनाका लागि माल्दिभ्स, साउदी अरब, ओमान, कुवेत र कतारमा चार्टर्ड फ्लाइटका लागि उडान तोकेको हो ।
बुधवार, भाद्र १० २०७७०७:१५:१५
# नेपाल बायुसेवा निगम
आज रातिबाट औपचारिक रुपमा नियमित उडान सुचारु गर्दै
महामारीमा पनि १० करोडको तक्मा : भिआइपीलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्दै खुलामञ्चबाट भोका नागरिक धपाइए
विद्यार्थी अलमल्याउँदै, शुल्क असुल्दै निजी विद्यालय ?
लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा पाँच बुँदे मापदण्ड, ५० प्रतिशत भाडा थप (विज्ञप्तिसहित)
सार्वजनिक यातयात बन्द हुँदा कोरोना कसरी फैलियो ? निजि सवारीलाई यात्रु बोक्न कसले दियो ?
महासंघले भन्यो- सार्वजनिक यातायात चल्दैन,माग पुरा नगरे चावी बुझाउने !